Minnesota Orchestra, hadda qarnigii labaad oo uu hoggaaminayo Agaasimaha Muusikada Osmo Vänskä, oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya astaanta qurxinta America, oo leh taariikh taariikheed oo ka mid ah dabeecadaha la soo bandhigay ee dowlad-goboleedka iyo adduunka oo dhan. Isbahaysiga ayaa soo bandhigaya ku dhawaad 200 oo barnaamij sanadkiiba, ugu horrayntii Orchestra Hall oo ku yaala bartamaha Minneapolis, xafladaheeda waxaa lagu dhagaystaa dhagaystayaasha nool ee 350,000 oo sannadkii.
Iyadoo qayb ka ah barnaamijka McKnight Arts ee barnaamijka farshaxanimada ee lagu maalgelinayo mashruucyada loogu talagalay ururada farshaxanka, McKnight wuxuu taageeray Mashruuca Guud ee Minnesota Orchestra. Iyadoo Orchestra ay eegtay mustaqbalka, waxay bilaabeen inay waydiistaan sida ay ula xiriiri karaan dadka ka baxsan Minneapolis-St. Aagga Booska Booska. Mashruucyada "Common Chords Project" ayaa soo baxay sidii istaraatijiyad looga jawaabo su'aashan. Mashruucan waxaa lagu sameeyey dukaanka Grand Rapids, kadibna Willmar, wuxuu bilaabay inuu qorsheeyo mudo todobaad ah oo uu degan yahay Oktoobar 2011. In ka badan 30 dhacdooyin bulsheed ayaa la qorsheeyey, oo ay ku jiraan isbeddel muusiko oo udhaxeeya muusikada Orchestra iyo bulshada Ojibwe gudaha, bandhigyada dadweynaha Iskuulka Grand Rapids, iyo afartan riwaayadood oo ay ka buuxaan Minnesota Orchestra. Ma dooneyso in ay xaddiddo farxadda hal toddobaad kaliya, guddiga wada xaajoodka ee Grand Rapids wuxuu abuuray dhacdo "Jimce ah Jimce", dabaal bille ah oo farshaxan ah oo ku yaal magaalada Grand Rapids.
Akhristayaasha caadiga ah waxay dhistaa matxafka Orchestra ee mudnaanta dheer ee waxqabadka dhagaystayaasha ee gobolka oo dhan. Miisaaniyadda Minnesota ee Orchestra waxay bilaabatay safarkeedii ugu horeeyay ee gobolka oo dhan 1907, iyaga oo tareenka u raacay Moorhead, Grand Forks, iyo Duluth. Tan iyo markaas ka dib, kooxdu waxay cayaartay 680 riwaayado ah oo ku dhawaad 60 magaalo oo Minnesota ah - laga bilaabo International Falls to Worthington - waxay ku qabataa jimicsiyada dugsiga, kaniisadaha, qolooyinka jaaliyada, tiyaatarada iyo banaanka weyn.